လူမှုမီဒီယာကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပညာလမ်းစဉ်သို့ပြောင်းလဲစေသလော။ | Martech Zone
သောကြာနေ့, ဇွန်လ 14, 2013 သောကြာနေ့, ဇွန်လ 14, 2013 Douglas Karr
သောကြာနေ့ပျော်စရာတချို့အတွက်အချိန်! လူအများ ကျေးဇူးပြု၍ မလိုက်ပါနှင့် ငါ၏အတုံးအင်အားသုံးလူမှုရေးနည်းဗျူဟာ။ ငါ့ကိုဘယ်သူကမှသတ်မှတ်ပေးခဲ့တာမသေချာဘူး စိတ် လူသိရှင်ကြားသို့မဟုတ်မပေမယ့်အံ့သြစရာစုံတွဲတစ်တွဲရှေးရှေးဖြစ်ကောင်းရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်မယုံသော်လည်း၊ အွန်လိုင်းတွင်ကျွန်ုပ်၏အငြင်းပွားမှုများတွင်အသည်းအသန်ရှိသည်။ ငါခဏခဏပူလာပေမဲ့သူတပါးရဲ့ထင်မြင်ချက်ကိုလေးစားဖို့ငါကြိုးစားနေတုန်းပဲ။
လူတစ်ယောက်၏ဘ ၀ ကိုတကယ့်ကမ္ဘာတွင်အမြဲတမ်းချိတ်ဆက်နေစဉ်ကာလကြာရှည်သက်ရောက်မှုသည်အပြည့်အဝနားမလည်သေးပါ။ အင်တာနက်စွဲလမ်းမှုကိုကုသမှုကို ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များအလယ်ပိုင်းလောက်ကတည်းကရရှိနိုင်ခဲ့သော်လည်း၊ ယခုအချိန်တွင်အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုအလွန်များပြားသောလူမှုရေးဆန့်ကျင်ရေးအပြုအမူများကိုလူအများကယခင်ကထက်ပိုမိုပြသလာကြသည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ လူမှုမီဒီယာကကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ပညာလမ်းစဉ်သို့ပြောင်းလဲစေသလား။
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလှုပ်ရှားမှု၏အဓိကရင်းမြစ်မှာကျွန်ုပ်သည်လူသိရှင်ကြားဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာတွင်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏နာမည်နှင့်ဓာတ်ပုံကို၎င်းပေါ်တွင်တင်ထားသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းပြောသောအရာများကိုတာဝန်ခံပါသည်။ ငါအမည်ဝှက်အောက်မှာဘာမှမလုပ်ကြဘူး အွန်လိုင်းပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့စိတ်ပညာအမူအကျင့်အများစုဟာလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်တဲ့လျှို့ဝှက်ဖုံးကွယ်မှုနောက်ကွယ်မှာပုန်းအောင်းနေတဲ့အချိန်မှာအွန်လိုင်းပေါ်မှာပုန်းအောင်းနေတဲ့လူတွေအပေါ်ဂယက်ရိုက်တာမျိုးမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ယုံကြည်ပါတယ်။ လူတွေဟာအွန်လိုင်းပေါ်မှာအရင်ကထက်ပိုပြီးယုတ်မာတယ်လို့ကျွန်မမထင်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်စာရင်းရှင်းမခံရရင်စိတ်ရောဂါဖြစ်ဖို့ပိုလွယ်ကူပါတယ်။
တစ် ဦး အဝင်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟာဗျူဟာ၏မှီခို
ဇွန် 19, 2013 မှာ 5: 09 pm တွင်
ဒါကအလွန်ကောင်းတဲ့ infographic ပါ။ ငါတော်တော်လေးတိကျတယ်လို့ထင်တယ် အရမ်းကြီးတဲ့ခေါင်းစဉ်။
3:2013 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 4, 03
၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ ထိုပြtheနာသည် ပို၍ အမြင်အာရုံနှင့်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်မည့်အချက်များဖြစ်သည်။ ဒါဟာအမေရိကန်တွေ ... အလုပ်နှင့်အတူ OBSESSED ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူလုပ်ဖို့အရာအားလုံးရှိပါတယ်။ သူတို့၏ဘ ၀ ၌အရာအားလုံးသည်အချို့သောအလုပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ လူတို့သည်မိမိတို့၏ကလေးများနှင့်အတူ (ကျွန်ုပ်တို့၏အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်များစသဖြင့်) အချိန်ဖြုန်းရန်အချိန်မရသောအခါကလေးများသည်မိဘများနှင့်ပြောဆိုဆွေးနွေးရန်သင်ယူခြင်းမရှိကြပါ။ လူများစွာသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုတိရိစ္ဆာန်များနှင့်ခွဲခြားထားသည့်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုမလေ့လာကြပါ။ ဒါကို ၀ င်ငွေအဆင့်တိုင်းမှာမြင်ဖူးတယ် ၀ င်ငွေမြင့်မားသောသူတို့သည်အလုပ်ခွင်တွင်သို့မဟုတ်အဝေးသို့ထွက်ခွာသွားကြပြီးအခွန်ဆိုင်ရာအကြွေးတိုးရန်အချိန်အနည်းငယ်သာကုန်ကြသည်။ မည်သည့်ထိန်းသို့မဟုတ် au စုံတွဲကိုမဆိုမေးမြန်းပါ၊ ၎င်းသည် ၀ မ်းနည်းဖွယ်ကောင်းသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်အမှန်တကယ်စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သည်။ လစာနည်းပါးသော ၀ င်ငွေရသူများအတွက် .many သည်ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ထပ်မံ၍ အလုပ်နှစ်ခုစသည်တို့လုပ်ဆောင်နေသည်။ အားလုံးဝမ်းနည်းစရာကောင်းတယ်…ဂျာမနီကအတူတူပါပဲ၊ မိသားစုအားလပ်ချိန် (အမေအမြဲတမ်းမဟုတ်တာ၊ အပန်းဖြေအနားယူချိန်) စသည်ဖြင့်ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ အကူအညီပေးရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုများ။ ငါဘယ်နေရာမှာမဆိုအမေရိကန်တွေအထိရောက်ဆုံးသောလုပ်သားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်တယ်။ အဲဒီနောက် ၆ နာရီအလုပ်ရက်ကိုသွားပြီးမင်းရဲ့dကလေးတွေကိုမွေးမြူပါ။
3:2013 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 7, 20
ငါ @driventowin: disqus ပြောသောအမေရိကန်များထဲမှတစ်ယောက်ဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်မိသားစုတစ်ခုတွင်အလုပ်တစ်ခုရွေးချယ်ကြောင်းသဘောမတူပါ။ ငါနှစ် ဦး စလုံးအမြဲတမ်းလုပ်ခဲ့တယ်၊ ငါ့ကလေးတွေနဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ဆက်ဆံရေးရှိတယ်။ မင်းငါ့ကိုစွန့်လွှတ်ရမယ်လို့မယုံဘူး ပြီးတော့ငါ့မိသားစုကိုဘယ်တော့မှနောက်ဆုံးထားမှာမဟုတ်ဘူး။
3:2013 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 10, 58
လူကိုကြားရတာအံ့သြစရာပဲ၊ ငါသူတို့မိသားစုရောက်လာပြီးအတူတကွထွက်ခွာသွားသည်ကိုသာသိသောမိသားစုများစွာကိုကျွန်ုပ်တွေ့သည်။ အခြားသူများကမူစီးပွားရေးဖိစီးမှုများကြောင့်တင်းမာနေသောကြောင့်ဘဝကိုမပျော်နိုင်ကြပါ။ ကလေးမမွေးခင်မှာထူထောင်ခဲ့သလား။ သို့မဟုတ်အရာရာတိုင်းပြီးနောက်? သင်၌ကလေးများရှိပါကလုပ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသော်လည်းလုပ်နိုင်သည်။
4:2013 pm မှာနိုဝင်ဘာ 10, 22
ငါ့ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးကို (ဒေါ်လာ0နှင့်ငါ့သားကောလိပ်တက်သည်) မဖွင့်မှီငါနှစ်ခုလုံးကိုအပြည့်အဝရောနှောနိုင်သည်။ ငါဟာသာမာန်အမေရိကန်ထက်ပိုပြီးနာရီများစွာအလုပ်လုပ်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာညသန်းခေါင်ကနေ ၄ နာရီအထိမိသားစုရဲ့အပြင်ဘက်ကိုရောက်နေတယ်